TrainStation မော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ဘူတာရုံ
နေအိမ် > ဘူတာရုံ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ရထားခရီးသွားခြင်းသည်ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်း၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာအချို့သည်ဥရောပနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိသည်, ကမ္ဘာပေါ်မှာ. အထွတ်အထိပ်နာရီမှာလူစည်ကားခံရနေသော်လည်း, ထိပ်5ဥရောပရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာများမှာ…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ခရီးသွားခြင်းသည်အဆုံးစွန်သောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်ခရီးဆောင်အိတ်များကိုအခမဲ့ပြုလုပ်သင့်သည်, အထူးသဖြင့် layovers ဘို့ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံဂျာမဏီရဲ့လူကြိုက်များမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်အခမဲ့တစ်ရက်ရှိပါက. ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ၎င်း၏သုံးခုအတွက်ဘယ်ဘက်ခရီးဆောင်နေရာများအတွက်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးရှိသည်…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အမှုအရာနေဆဲဤအချိန်လောက်အနည်းငယ်ရှိအေးမြသောဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့် Nice ပွဲတော်ကြီးသင်တက်နွေးဖို့သေချာဖြစ်ပါသည်! ပြင်သစ်ရီဗီယာရာသည်ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကမ္ဘာတလွှားမှ visitors ည့်သည်သန်းတစ်ရာနီးပါးသည် Nice သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်. Nice ပွဲတော်သည်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ တစ်ဘူတာသို့ဆွဲရထား၏ whooshing သံကို, နှင့်ပေါ်ရတဲ့နှင့်တစ်နေရာရာကိုသွား၏ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့. သငျသညျနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများထက် သာ. ကောင်း၏ဘာမှစဉ်းစားနိုင်သလား? ရထားခရီးသွား၏ရွှေခေတ်တစ်သတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်း. ဘယ်အချိန်မှာလူ…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပတိုက်တွင်ကျောင်းသားခရီးသွားဖြင့်ရထားမသာပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပညာရေးနှင့်သန့်စင်, လွန်း. ပို. ပင်အရေးကြီးသောအများအပြားကျောင်းသားများကိုကြောင်း (နှင့်မိဘများ) ၏မရှိသလောက်ထင်အားလုံးလက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်, ကျောင်းသားများကိုလွတ်လပ်သောဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်လေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ, Self-ညွှန်ကြား, တာဝန်ရှိသော,…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ စပိန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနှင့်တက်ကြွသောမီးရထားဘူတာရုံ၏နံပါတ်ရှိပါသည်. သင်တွေ့လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း, အလတ်စားအကွာအဝေး, ဒေသဆိုင်ရာ, တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးမြို့ပြနှင့်ဟိုတယ်-မီးရထားခရီးသွားလာ. ကြီးမားသောခေတ်သစ်ဘူတာကနေသဘာဝကဝိုင်းသေးငယ်သူတို့ကို, ဤအရာများသည် 10 စပိန်ရဲ့အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထား၏…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဘဝလမ်းခရီးထက်ဦးတည်ရာအကြောင်း, ဤအလှဆုံးရထားလမ်းဘူတာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် – တကယ်ပြောနေမှန်ကြောင်း. အများဆုံးခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏ခရီးစဉ်များအတွက် Starting Point သို့အဖြစ်ရထားဘူတာကိုချဉ်းကပ်နေချိန်တွင်, သင်တို့သည်ဤရထားဘူတာကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ…